As Php codes can freely mix with Html codes, special tags are needed to seperate them.
All PHP code must be written betweenapair of special start tag and end tag
Examples of php tag usage are shown below:-
Web pages that contain Php codes must be saved with .php extension.Then only the server will parse the Php codes.
Example:- A simple HTML & PHP page
Below is an example ofa.php file where PHP and HTML codes were written together.
After saving the above codes asa"helloworld.php" file, place it onaPHP enabled server and view it with your web browser.
You should see "Hello World!" displayed.
PHP function echo was used to to write "Hello World!" to the browser.
More about this PHP function and many others will be explained later.
Every line of Php code must end withasemicolon. It signifies the end ofaPHP statement and should never be forgotten.
For example, if we repeated our "Hello World!" code several times, thenasemicolon is needed at the end of each statement.
Whitespace is ignored between PHP statements.This means it is OK to have one line of PHP code, then 20 lines of blank space before the next line of PHP code. You can also press tab to indent your code and the PHP interpreter will ignore those spaces as well.
For more detail please see Php Manual at http://www.php.net
Php codes နှင့် Html codes တို့ကို တွဲရေး သော အခါ ၎င်းတို့ နှစ်မျိုး ရောနှော မသွား စေရန် special tags များကို အသုံးပြု၍ ခွဲခြားရ ပါသညိ။
PHP code အားလုံး ကို special start tag နှင့် special end tag တို့ကို ရှေ့နောက် ပိတ်ပြီး ရေး သားရ ပါသည်။
Php tag အသုံး ပြုပုံ ကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြ ထား ပါသည်။
PHP Page များကို Save လုပ်ခြင်။
Php codes ပါသော webpage များကို .php file extension သုံးပြီး save လုပ်ရ ပါမည်။
PHP and HTML codes နှစ်မျိုး တွဲ္စ၍ ရေးထား သော [.php] ဥပမာ တခု ကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြ ထား ပါသည်။
အထက် ဖေါ်ပြပါ code အား helloworld.php ဖိုင် အဖြစ် save လုပ်ပြီး PHP run နိုင် သော server တွင် post လုပ် ၍ web browser တွင်ကြည့် ပါက "Hello World!" ဟု တွေ့ ရ ပါ လိမ့်မည်။
PHP function echo ကိုအသုံး အသုံး ပြုပြီး browser တွင် "Hello World!" ဆိုသည့် စာလုံး ကို ရေးထား သည်ကို သတိ ပြုပါ။
အထက်ပါ PHP function အပြင် အခြား functions များ အကြောင်း ကို လည်း နောင်တွင် ဖေါ်ပြ သွား ပါမည်။
Php code လိုင်းတိုင်း ၏ အဆုံးတွင် semicolon တခုကို အမြဲ ထည့်ပေး ရသည်။ ၎င်း semicolon သည် PHP လိုင်း တလိုင်း ဆုံးသွား ပြီးဖြစ် ကြောင်း ဖေါ်ပြ သည့် အမှတ် အသား ဖြစ် ပါသည်။ မည်သည့် အခါမှ မေ့၍ မရပါ။
ဥပမာ "Hello World!" ဆိုသည့် code ကို ၅ ကြိမ် ရေး မည်ဆို ပါက၊ code လိုင်းတလိုင်း ဆုံးတိုင်း semicolon တခု ကိုထည့် ပေး ရမည်။ အောက် တွင် ဖေါ်ပြ ထားသော example ကိုကြည့်ပါ။
PHP code သည် white space များ၊ tab များ၊ indent များ နှင့် လိုင်း အလွတ် များကို လှစ်လျူရှု သည်။ PHP code တလိုင်း ရေးပြီးနောက် လိုင်းလွတ် ၂၀ ချန်ပြီး နောက် တဖန် PHP code တလိုင်း ထပ်ရေး သည် ဆိုပါစို့။ PHP interpreter သည်ထို လိုင်းလွတ် အားလုံးကို လှစ်လျူရှု ပါသည်။ အောက်တွင် ဖေါ်ပြ ထာ။သော example ကိုကြည့်ပါ။